कोरोनाको कलर ट्यून हटाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा – NepalajaMedia
कोरोना भाइरसको खतरालाई मध्यनजर राख्दै भारतमा लकडाउन भयो । लकडाउनसँगै कसैलाइ फोन गर्दा सबैभन्दा पहिला कोरोनाबाट कसरी जाेगिन सकिन्छ भन्ने लागि सन्देश सुन्न पाइन्छ । भारतमा सुरुसुरुमा अरुकै आवाजमा यस्तो किसिमको सन्देश आए पनि अहिले भने बलिउडका दिग्गज कलाकार अभिताभ बच्चनको आवाज सुनिन्छ ।
Prevन बोल्न जिब्रो चल्छ न हिँड्नलाई खुट्टा, बाँसबाट बनाउँछन् अदभुत कलाकृति !
Nextराशि अनुसार तपाईलाई कस्तो काम फाप्छ ? जान्नुहोस् !
एमसीसी छिटो कार्यान्वयन गर्नु : अमेरिका